Kooxda Farsamada Xoogan
Waxaan leenahay koox farsamo oo xoog leh oo ku jirta warshadaha, tobanaan sano oo waayo-aragnimo xirfadeed ah, heer naqshadeyn heer sare ah, abuurista qalab wax ku ool ah oo tayo sare leh.
Shirkaddu waxay isticmaashaa nidaamyada naqshadaynta horumarsan iyo isticmaalka heerka sare ee ISO9001 2000 maaraynta nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah.
Shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista qalab tayo sare leh, xoog farsamo oo xoog leh, awood horumarineed oo xoog leh, adeegyo farsamo oo wanaagsan.
Qalabka mesh-qurxinta waa birta aan fiicnayn, aluminium aluminium, naxaas iyo qalabyo kale. Midabka daahyada mesh birta waa la bedeli karaa. Marka la eego iftiinka iftiinka, booska male-awaalku waa mid aan dhammaad lahayn. Waxaa badanaa loo isticmaalaa wajiga, qaybta gudaha, saqafka, derbiga, balakoonka iyo dariiqyada dhismayaasha. Hadda waxaa loo isticmaalaa garoonka diyaaradaha, hoteelada, hoolka bandhigga, guriga opera, dhismaha xafiisyada, dukaameysiga, baar iyo qurxinta kale ee gudaha iyo dibadda.
ShuoKe waxay sidoo kale soo saartaa mesh ilaalinta badbaadada kala duwan, dayrarka barxadda, dayrarka ilaalinta qaboojiyaha, ilaalinta waddooyinka, iwm. si ay u bixiso wax soo saar cusub oo amniga nolosha ah, sida ilaalinta tuugada iyo walxaha dhacaya. Dayrarka ay soo saartay ShuoKe waxay leeyihiin faa'iidooyinka badbaadada, quruxda iyo wax ku oolka, iyo habaynta bilaashka ah ee macaamiisha.
Raadintayada hal-abuurka iyo tayada sare, waxay leedahay naqshad adag, horumarinta, iyo awoodaha wax-soo-saarka, sidaas darteed mesh silig alaabtayada ayaa si qoto dheer u jeclaaday macaamiisha .. Hadda, alaabtayada ayaa loo dhoofiyay Maraykanka, Kanada, Europe, Australia , Spain, South Korea, Japan iyo in ka badan 20 waddan.
Haddii aad u baahan tahay inaad u habayso alaabta mashruucaaga, fadlan nala soo xidhiidh.